people Nepal » मुख्य खबर मुख्य खबर – Page 146 – people Nepal
तीन दिनभित्र देउवा प्रधानमन्त्री !
17:34:04 | मुख्य खबर समाचार , Purna Nanda Joshi
१८ जेठ, काठमाडौं । सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको ७ दिनको समय सकिएपछि अब बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चुनिने भएका छन् । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको दौडमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मात्र देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेको छैन । तर, देउवालाई सहजै प्रधानमन्त्री बन्न दिने सोचमा पनि एमाले […]
१८ जेठ, चितवन । भरतपुर महानगरपालिका मतगणनाका क्रममा ९० मतपत्र च्यातिएको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगले च्यातिएको मतपत्र गन्न निर्देशन दिएपछि उम्मेदवारहरुको रोहवरमा बिहीबार शिलबन्दी खोलिएको थियो । भरतपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘क्षति भएको मतपत्र ९० रहेको देखियो । म यही रिपोर्ट निर्वाचन आयोगसमक्ष पठाउँछु ।’ जेठ १४ गते मध्यराति १९ नम्बर […]
यौनसम्बन्ध पछी फेरी भर्जिन हुन के गर्ने ?
| मुख्य खबर समाज स्वास्थ्य , Durga Panta
प्रश्न: म २० वर्षकी भएँ । मैले आफ्नो केटासाथीसँग धेरै पटक यौनसम्बन्ध राखेकी थिएँ । अहिले उसले मलाई छोडेको एक वर्ष भयो । मेरो परिवारबाट अर्को केटासँग विवाह गराइँदैछ । म भर्जिन छैन । त्यसैले मैले यौन सम्बन्ध राखेको थाहा हुन नदिन के गर्नुपर्छ ? मेरो भनाइको अर्थ फेरि भर्जिन हुन के गर्नुपर्ला ? – […]
अब चन्द्रमामै बच्चा उत्पादन
| मनोरञ्जन मुख्य खबर , Durga Panta
विज्ञान जगतमा हरेक दिन नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धान भैरहन्छन् । यसपटक वैज्ञानिकहरुले यस्तो आविष्कार गरेका छन् की जसका बारेमा सुन्दैमा तपाइँ आश्चर्यमा पर्नुहुनेछ । यहाँ पृथ्वीमै बाँच्न मुस्किल भैरहेको छ अनेक कारणले गर्दा । त्यसैले चन्द्रमामा घर गृहस्थी बसाल्ने योजना दुनियामा बनिरहेका छन् । ती मध्ये कतिपय दिवास्वप्न होलान् त कतिपयले पूरा गरेरै छाड्लान्, त्यो […]
बच्चालाई जस्तो चाहनुहुन्छ, त्यस्तै बनाउन सक्नुहुनेछ । घरको चालचलन, बोलीचाली, व्यवहार सबै कुरा बच्चाले सिक्छन् । र, त्यही अनुसार उसको जीवनशैली पनि निर्देशित हुन्छ । त्यसैले घरको वातावरण त्यस्तो हुनुपर्छ, जसले बच्चामा असल प्रवृत्तिको विकास होस् । बच्चालाई के गराउने, के नगराउने, के खान सिकाउने, कसरी खान सिकाउने सबै कुरा तपाईको हातमा छ । […]
देवीका छोराले रेणुलाई ‘सडकमा नांगै हिड्न’ भने
17:13:39 | मुख्य खबर समाचार , Purna Nanda Joshi
देवीका छोराले रेणुलाई ‘सडकमा नांगै हिड्न’ भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को अालोचना चितनव । भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना स्थगित छ । वडा नम्बर १९ को मत गन्ने समयमा मतपत्र च्यातिएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।नेकपा एमाले र प्रहरीले माओवादी केन्द्र-काँग्रेस गठबन्धकी उम्मेदवार रेणु दाहालको प्रतिनिधिले च्यातेको अारोप लगाइरहेका छन् भने माओवादी केन्द्रले एमालेले च्यातेको दाबी गर्दै अाएको […]
१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन फेरि केही दिन सार्ने भएको छ । बुधबार बिहान बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यससम्बन्धी निर्णय लिने आजका पत्रपत्रिकाहरुले लेखेका छन् । बुधबार प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरुले नेपाली सेनाको जहाज दुर्घटना भएको विषयलाई पनि प्रमुखताका साथ छापेका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि भइरहेका सक्रियतालाई पनि आज प्रकाशित पत्रिकाहरुले लेखेका छन् […]
छानबिन समितिले अनुसन्धान सक्यो, के होला भरतपुरको मतगणना ?
| मुख्य खबर समाचार समाज , Durga Panta
१७ जेठ, काठमाडौं । गत ३१ वैशाखमा भएको मतदानमा झन्डै एक लाख १२ हजार भरतपुरवासीले मतदान गरे । करिब एक लाख आठ हजार मत सुरक्षित गनियो । गणना गर्न बाँकी अन्तिम चार हजार मत निर्णायक हुनेवाला थियो । तर, सो मतगणना हुनै पाएन । एकाएक मतपत्र च्यातिएपछि अब वडा नं. १९ मा पुनः मतदान कि […]
सरकारले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिलाई सरकारको तजबिजी निर्णयका आधारमा उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधालाई पारदर्शी बनाउन ऐन बनाउन खोजिएको हो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ । राष्ट्राध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिका लागि १ लाख ८ हजार ३० प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा दुवै पदाधिकारीका […]
जेठ १७, काठमाडौं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दाङका शिव चौधरीको उपचारमा मेघा अस्पतालले गरेको लापरवाही तथा चर्को शुल्क असुलेको घटनाबारे छानबिन थालेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले मेघा अस्पतालको घटनाप्रति चासो देखाउँदै तत्काल छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि काउन्सिलले छानबिन सुरु गरेको हो । राँगाले हानी घाइते भएका चौधरीको ललितपुरस्थित मेघा अस्पतालमा […]